Odeeffannoo ammaa, waa'ee galmee ka'aa agarsiisa.
Qareen kutaa moggafamee tokko keessa yammuu tahu, maqaa kutiichaatu mul'ata. Yammuu qareen gabatee keessa ooluu, maqaa man'ee gabatichaatu mul'ata. Hamamtaan wantaa, yammuu ati goodayyaawwan yk wantawwan fakkasaa gulaaltu mul'ataniiru.
Qareen yammuu barruu keessa qubatuu, qaaqa Dirreewwan banuuf, dirree kana lama-cuqaasuu nidandeessa. Qaaqa kana keessatti, galmee kee keessaa akka bakka qubannoo qaree ammaatti saagamuu dirree tokko qindeessuu nidandeessa. Yammuu qareen gabatee tokko keessa ooluu, dirree kana keessa lam-cuqaasuun, qaaqa Dhangii Gabatee waama. Wanta filatame irratti hundaa'uun, kutaa tokko, wanta saxaatoo tokko, goodayyaa bololi'aa tokko, wanta OLE tokko, lakkaawwii kalati yk qubannoo fi hamamtaa kan wanta fakkasaa gulaaluuf, qaaqa waamachuu nidandeessa.
Title is: Agarsiisaa Makamee